Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Arrimaha Gudaha oo saaka ku sii jeeda Jowhar – STAR FM SOMALIA
Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Arrimaha Gudaha oo saaka ku sii jeeda Jowhar
Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Arrimaha Gudaha C/raxmaan Maxamed Xuseen Odawaa oo ay qeyb ka yihiin Odayaasha dhaqanka Gobolka Hiiraan ayaa saaka lagu wadaa inay tagaan magaalada Jowhar ee xarunta Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Sida ay sheegayaan wararka qaar ka mid ah Duubabka dhaqanka Gobolka Hiiraan ee aqbalay inay ka qeyb galaan shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa ku biiri doono odayaasha dhaqanka Sh/Dhexe, si dib loogu bilaabo shirka maamul u sameynta labada gobol.
Wararka ayaa intaa ku daraya inuu wasiirka Arrimaha Gudaha uu kaga dhawaaqi doono magaalada Jowhar in talada shirka maamul u sameynta labada gobol gacanta loo geliyay odayaasha, isla markaana dowladdu ay fududeeyo ka noqon doonto.
Qaban qaabo lagu soo dhoweynayo wafuuda ballaaran ee Hiiraan ka imaaneyso ayaa ka socota magaalada Jowhar, iyadoo qeybtii u horeysay wafuudaas ay shalay gaareen magaalada Jowhar, kuwaasoo la dejiay goobo loogu tala galay.
Dowladda Federaalka ayaa dooneysa inay dedejiso shirka maamul u sameynta labada gobol, kaasoo muddo hakad ugu jiray diidmo ka imaaneysay odayaasha dhaqanka Gobolka Hiiraan, kuwaasoo saluugsanaa qaabkii Wasaaradda Arrimaha Gudaha u qeybisay nabadoonada soo xulayay ergooyinka.
Wafdigii uu hogaaminayay Madaxweynaha ayaa ku guuleystay in inta badan odayaasha dhaqanka Hiiraan ka dhaadhiciyaan inay Jowhar tagaan, isla markaana dib loo bilaabo shirka.
Hase ahaatee saddex ka mid ah oday dhaqameedyo ayaa diiday inay Jowhar tagaan, waxaana oday dhaqameedyadan ku adkeysanayaan mowqifkooda ahaa in gogosha lagu soo celiyo Beledweyn iyo in la qabto shir dib u heshiisiin.
Waxaa lagu wadaa in uu dib ufurmo shikii maamul u sameenta gobalada hiiraan iyo sh/dhexe
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland oo shaaciyay caqabada ka haysata soo magacaabista Golaha fulinta